Swagat Nepal:: ढाका टोपीको इतिहास, छोरी मान्छेले पनि किन लागाउने ? र, वर्षमा एक दिन मात्र लगाउनेहरुलाई के भन्ने ?
ढाका टोपीको इतिहास, छोरी मान्छेले पनि किन लागाउने ? र, वर्षमा एक दिन मात्र लगाउनेहरुलाई के भन्ने ?
म त ढाका टोपी लगाउन टोपी दिवस भन्ने दिन पर्खेर बस्दिनँ, सधैँ लगाउँछु, तर यो दिन मात्र कुरेर बस्नेहरुलाई पनि सम्मान नै गर्छु,
यहाँ भने प्रसंग अलिकति फरक छ,
कुरा के भने,
जंगबहादुरले प्रशंसा गरे नयाँ आफ्नै पाराको टोपी नेपालीहरुको भयो भनेर । उनले लगाए । पछि अन्य भारदारहरुले पनि लगाउन थाले । यस्तो टोपी, यस्तो पाराको बुट्टाको अहिले पनि बंगलादेशमा लगाउँदैनन् स्थानीयले । त्यो बनेको नै हाम्रो आफ्नो हो । उनीहरु त्यसको टोपी लगाउँदैनथे त्यो बेला पनि । धेरै समुदायमा अहिले पनि विवाहमा टोपी लगाउनै पर्ने र अविवाहित पुरुषलाई टोपी लगाउन अनुमति नहुने समय पनि थियो, अविवाहित महिलाले सिन्दुर लगाउन अनुमति नभएजस्तो ।
यो टोपी बंगलादेशबाट आएको हो भन्नेहरुको भनाइ घाँसीले घाँस बेचेर कुवा खनाउने हावादारी कथा मोतीरामले भानुभक्तको प्रेरणाको बारेमा कथेजस्तो हो । किनकि त्यो बेला त के अहिले पनि तनहुँको रम्घा गाउँमा घाँस बिक्री हुँदैन, त्यो बेला घाँस किनेर कोही पनि गाइैभैसीलाई खुवाउँदैनथ्यो । त्यसो गर्नुभन्दा गोठालो राख्नु फाइदा हुन्थ्यो, त्यस्तै ढाका टोपी न त्यो बेला बंगलादेशीले लगाउँथे, न अहिले नै । त्यो हामीले बनाएको हो ।
डम्बर कुमारीले बनाएको हो पहिलो पटक, जोसुकैको छोरी बैनी होस् एक नेपाली चेलीले बनाएको हो । उनले सिर्जनशील रुपमा नेपाली उद्योगको युग शुरु गरिन्, उनी क्रिएटिभ थिइन् । त्यसैले अहिले टोपी छोरीहरुले लगाएर फेसबुकमा फोटो राखेकोमा इतिहासलाई सम्झौँ कि यो छोराले लगाए पनि छोरीले नेपाली उद्योग शुरु गरेको खुसीमा पनि नारी उद्यमशीलता, सिर्जनशीलताको प्रतीक पनि हो । बंगलादेशबाट आएको भन्नेहरुको भ्रममा नपरौँ ।
अमेरिकी ट्विन टावरमा अट्याक गरेपछिको समयमा अमेरिकामा राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग बढ्यो, माग बढ्यो, अमेरिकाले आफै उत्पादन गर्न भ्याएन, चीनले अमेरिकाको राष्ट्रिय झण्डा बनाएर सप्लाई गरिदियो । कुनै विवाद भएन, आफ्नो मान्छे र आफ्नो चीज जहाँबाट आए पनि आफ्नै हुन्छ हा हा । जम्मामा छोराले लगाउने भए पनि छोरीको योगदान, सिर्जनशीलता र उद्यमशीलताको इतिहासको सम्झना पनि हो ढाका छोरीहरुले लगाउनु भनेको । लगाउनु पर्छ ।